Al-shabaab: ''Waan dilnay Dennis Allex''
17 Jan 17, 2013 - 7:01:35 AM
b ayaa sheegay inay toogteen Dennis Allex oo ah sarkaal u dhasha dalka Faransiiska oo ay Muddo sanado ah gacanta ku hayeen, kasoo dhawaan ay dowlada Faransiiska isku dayday inay xoog ku furato.
Bayaan kasoo baxay Al-shabaab ayaa lagu sheegay in Dennis Allex ay dileen habeenkii xalay oo Arbaco ah, iyagoo sheegay inay dileen iyagoo ka jawaabaya weerar ay ciidamada gaarka ah ee Faransiisku ku qaadeen deegaanka Buulo Mareer oo lagu hayay sakaalkan.
Madaxweynaha Faransiiska ayaa isaguna horay u sheegay in sarkaalkaas uu ku dhintay weerarkii la doonayay in lagu soo furto, isagoo sheegay inay si lama filaan ah u toogteen kooxihii gacanta ku hayay.
Dowlada Faransiiska waxay sheegtay in howgalkaas ay kaga dhinteen laba Askari sidoo kalena ay ku dileen 17 dagaalyahan oo Al-shabaab ka tirsan, inkastoo Al-shabaab aysan ka hadlin khasaaraha dhankooda kazoo gaara weerarkaas.
Inkastoo Al-shabaab aysan sheegin halka uu dilka ka dhacay ayaa hadana warar hoose oo laga helayo Kooxdan waxay sheegayaan in sarkaalkan lagu dilay deegaanka Buulo Mareer oo lagu hayay muddo sanad ka badan.
Ma jiro cadeyn ay Al-shabaab ku sheegtay qaabka uu dilku u dhacay, balse waxay sheegeen in Dilkiisa ay sabab u ahayd Dowlada Faransiiska oo ay ku eedeeyeen inay isku-dayday dhowr jeer inay xoog ku furato, iyadoo diiday in wadahadal lagu sii daayo.
Waa markii ugu horeysay oo Al-sabaab ay si bareer ah u toogato la hayste Reer Galbeed ah oo gacanta ugu jiray Sadex Sano, waxaana sarkaalkan iyo saxiibkiis oo lasii daayay laga afuubay Hoteel ku yaala Muqdisho sanadkii 2009.